Shina tahirin-jo hampiasa hery mba hitondra Taiwan eo ambany ny fanaraha-maso, Xi Jinping milaza - Ny tsy Miankina - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Shina tahirin-jo hampiasa hery mba hitondra Taiwan eo ambany ny fanaraha-maso, Xi Jinping milaza - Ny tsy Miankina
'Tsy fampanantenana ny hanafoanana ny fampiasan-kery sy ny hitehirizany ny safidy ny fampiasana ny fepetra rehetra ilaina' Beijing ny toeram-piarovana"ny safidy ny fampiasana ny fepetra rehetra ilaina"mba hanitatra ny fitsipika mahaleotena ny nosy repoblika dia milaza ho anisan'ny"iray Shina", ny filoha hoy ny kabary feno fanoloran-tena ny olana amin'ny alarobiaTsai Tra-wen, Taiwan ny filoham-pirenena, hoy Atoa Xi tokony ampiasaina am-pilaminana dia midika hoe hamahana ny tanibe ny fahasamihafana amin'ny Taiwan sy ny fanajana ny hasina demokratika. Andriamatoa Xi efa nanao firaisana indray ny manan-danja amin'ny olana ara-politikan'ny ary nanome ny adiresy eo amin'ny faha- taonan'ny ny fanapahan-kevitr'i Shina hampitsahatra ny fitaovam-piadiana daroka baomba avy ao Taiwan nosy sy hanokatra ny fifandraisana. Taiwan sy Shina raraka tamin'ny ady an-trano izay nitondra ny komonista ny hery eo an-tanibe tamin'ny.
Ny mpifaninana nasionalista nanangana iray hafa avy amin'ny governemanta ao amin'ny nosy izay lainga mikasika ny an-jatony kilaometatra niala ny moron-dranomasin'i Shina.
Fa ny governemanta Shinoa dia matetika no nandefa fiaramanidina miaramila sy ny sambo mpiady ny faribolana Taiwan tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, Andriamatoa Xi niavosa ny fanerena eo amin'ny nosy demaokratika satria Ramatoa Tsai, avy ny mpanohana ny fahaleovantena ara-Demokratika Progresista Antoko, lasa filoham-pirenena amin'ny taona.
Ny fandrahonana ny hery dia mikendry ny ao Taiwan ihany ny fahaleovantena ny filaminana ary koa ny vahiny ny fahefana izay mety hitady hiditra, Andriamatoa Xi soso-kevitra, raha tsy misy ny ankoatra izay dia azo inoana fa momba ANTSIKA, ao Taiwan matanjaka indrindra mpanohana.
Andriamatoa Xi nilaza fa fampiraisan-tsaina ho latsaky ny iray-firenena roa-rafitra rafitra izay dia manaja ny ara-tsosialy ao Taiwan ny rafitra sy ny fomba fiainana ary miantoka ny fananana ny zo, ny ara-pivavahana sy ny zon'ny hafa.
Fa toy izany koa lasa vola ny hoavin'i Hong Kong, dia tsy nanakana an'i Beijing fanamafisana ny mafy ny tanàna, miaraka amin'ny mpikatroka mafàna fo naneho ny tahony mikasika ny tsy mitsaha-mitombo ny tsindry atao amin'ny fahalalahana ara-demokratika. Izany no antony, ao amin'ny vanim-potoana ny politika lainga sy ny Brexit fitongilanana, bebe kokoa ny mpamaky dia mitodika mahaleotena ny loharanom-baovao.
Misoratra anarana avy fotsiny p andro iray fanampiny ho an'ny exclusives, zava-nitranga sy ny eBooks - rehetra tsy misy dokam-barotra. Te-hiresaka-tena izao tontolo izao ny olana, ho tafiditra ao am-tena ny fanaovana fifanakalozan-kevitra ary mandre avy amin'ny mpanao gazety. Miezaka tsy Miankina Saina maimaim-poana ho an'ny iray volana Na iza na iza afaka lahatsoratra ao misokatra ny fanehoan-kevitra. Miangavy ny fanajana ireo rehetra ireo mpaneho hevitra ary mamorona mahasoa ny adi-hevitra. Te-hiresaka-tena izao tontolo izao ny olana, ho tafiditra ao am-tena ny fanaovana fifanakalozan-kevitra sy mandre avy amin'ny mpanao gazety. Miezaka tsy Miankina Saina maimaim-poana ho an'ny iray volana Tsy miankina Saina Fanehoan-kevitra azo nalefan'ny mpikambana ao amin ny maha-rafitra, tsy Miankina Saina.
Izany dia mamela ny tena mirotsaka ny mpamaky ny adihevitra momba ny olana lehibe, mizara ny zavatra niainany, hiresaka-tena izao tontolo izao vahaolana, sy ny maro hafa.
Ny mpanao gazety dia miezaka mamaly amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny kofehy izy ireo rehefa afaka hamorona ny tena fivoriana tsy miankina saina. Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny foto-kevitra rehetra dia avoaka isan'andro amin'ny fanoloran-tena lahatsoratra. Azonao atao koa ny misafidy ny ho nanoratra e-mail rehefa misy olona namaly ny fanehoan-kevitra. Efa misy Fanehoan-kevitra Misokatra kofehy dia mbola misy ho an'ireo izay tsy misoratra Mahaleotena ny Saintsika. Noho ny ambaratonga, noho ny fanehoan-kevitra ity fiaraha-monina, dia tsy afaka hanome isaky ny lahatsoratra tsirairay dia mitovy lenta ny saina, fa isika no voaro amin'izany ny faritra ao amin'ny mahaliana ny adihevitra misokatra. Miangavy ny fanajana ireo rehetra ireo mpaneho hevitra ary mamorona mahasoa ny adi-hevitra. Te rohy ny toerana tena lahatsoratra sy tantara ny mamaky na momba taty aoriana Miezaka tsy Miankina Saina maimaim-poana ho an'ny iray volana ny mahazo izany endri-javatra.
Fito Zavatra manan-Danja ny Vehivavy dia Mila Mahafantatra Momba ny fiantraikan'ny Hetra Alimony Fandoavam-bola
Autortiesību Aizsardzība Ķīnā - Tā ir Reāla, un Tas ir Iespaidīgs - Ķīna Tiesību Blogā